China Track onye nrụzi / Tensioner ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Bonovo
Ihe onwunwe 60AKA2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA
Waya dayameta 5mm ~ 80mm
ekweghị ekwe 45HRC ~ 55HRC
Ntuziaka nke eriri igwe Aka nri, aka ekpe
Ngwa Excavator, igwe digger, ụgbọ ala, ụgbọ oloko, igwe mkpuchi, wdg.
Agba Blackwhite, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, odo, isi awọ, wdg.
Usoro mmepụta Hot guzobere. Oyi kpụrụ
Rịba ama Ndị ahịa nwere ike ịbugharị ihe ndị a na nkọwapụta ya.
Ihe Ntupụta / Nhazi
Akụkụ: nzukọ nhazi zuru ezu / mmiri na-agba ọsọ assy, ​​ma ọ bụ onye na-akpọ ya onye na-enweghị mgbagha nke gụnyere ihe ndị ahụ
Na-ewu ewu elsdị:
A na-akpọkwa Tensioner maka igwe ihe eji arụ ọrụ Recoil Spring Assembly.
Ọ mejupụtara haịdrọlik usoro, nlaghachi mmiri na njikọ akụkụ.
Nanị otu ndị na-eme ka mmanụ ghara ịhụ mmanụ, na-enye ọnọdụ ọnọdụ nke usoro hydraulic siri ike maka ọnọdụ ọrụ ọ bụla.
Ngwa nke akpaka na igwe na-acha ọkụ ọkụ n'ime ọkụ ọkụ ọkụ eletrik nwere ike ime ka ọkụ nke ihe dị nha nke ọma, n'ihi nsonaazụ mmiri emechara ka ọ kwụsie ike.
Ule: anyị nwere ụkpụrụ dị mma ma anyị na-agbaso SOP siri ike ịga nyocha nyocha
Lelee erughị ala Track gị mgbe niile
Jiri igwe rụọ ọrụ dịkarịa ala ọkara elekere iji mee ka egwu ahụ rute ebe ọrụ tupu ị chọpụta ma tọọ egwu egwu. Ọ bụrụ na ọnọdụ agbanwe, dị ka mmiri ozuzo ọzọ, dozie esemokwu ahụ. Erughị ala kwesịrị mgbe niile ịgbanwe na-arụ ọrụ ebe. Loose esemokwu na-akpata iti na elu gbapụrụ ọsọ, n'ihi na oké bushing na sprocket eyi. Ọ bụrụ na egwu ahụ siri ike, ọ na - akpata nchekasị na ụgbọ okpuru na ịnya ụgbọ oloko ka ị na - emebi ike ịnyịnya.
Erughị egwu egwu nwere ike ibute ịbawanye ụba, yabụ ọ dị mkpa ịgbaso mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị. Dị ka iwu zuru oke, mgbe ndị ọrụ gị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị nro, apịtị apịtị, a na-atụ aro ka ị na-agba ọsọ egwu ntakịrị.
"Ọ bụrụ na egwu nchara siri ike ma ọ bụ tọghee oke, ọ nwere ike mee ngwa ngwa ngwa ngwa," "Azọ egwu nwere ike ime ka egwu ndị ahụ kwụsị."
Nke gara aga: Track Nche
Osote: Njikọ Njikọ
pusi excavator track erughị ala
onye na-egwu ihe ndozi
excavator egwu adjuster
excavator egwu tensioner
komatsu excavator na-agbaso ọgbaghara
komatsu soro erughị ala
mini excavator track esemokwu